घान्द्रूकको घुमाइ – Discovery4p.com
Basanta Maharjan Travelouge Leaveacomment 830 Views
यस अघि कहिल्यै नसुनिएको यो नाम स्थानिय गुरुङहरुको कुनै बेलाका आदरनिय पुर्खा हुनुपर्छ र अहिले यसरी मन्दिर नै बनाएर पुज्न थालेछ । वास्तवमा घान्द्रूकको पर्यटनका सन्दर्भमा यो नाम र ठाम उल्लेख हुने गर्दैन तर स्थानियहरु यसलाई खुबै मान्दा रहेछन् । उल्लेख त यहाँ चिया बगान छ भनेर पनि हुँदैन ।
यात्रामा भेटिने सहयात्रीहरु पनि थरी थरीका हुन्छन् । सहयात्रीहरुबाटै पनि यात्रा रमाइलो हुन्छन्
कहिलेकाहीँ । जीपमा त थुप्रै मान्छे चढेका छन् तर थोरै सँगमात्र कुराकानी भयो । यही क्रममा थाहा भयो, हामी घान्दू्रक पुग्ने बेलासम्ममा त सबै होटेलहरु प्याक भइसक्छन्, समस्या पर्नसक्छ । नयाँ वर्षको अवसर पारेर हामी यात्रामा निस्केका, हामी मात्र कहाँ हो र, अरु पनि त्यस्तै गरी निस्केका हुन्छन् । होटेलहरु प्याक हुनु स्वाभाविक हो । एक जना सहयात्रीले सोध्यो– होम स्टेमा बस्नु हुन्छ ? यस्तोमा होम स्टे मात्रै के खाली होलान् र ? तर पनि हुन्छ भनें । मोबाइल सेल झिक्यो र गाडी भित्रैबाट फोन हान्यो । कोठा खाली भए नभएको बुझ्यो । त्यो घरमा कोही आइनसकेको रहेछ । हाम्रो लागि भनेर एउटा कोठा रिजर्भ गर्न भन्यौ । ढुक्क भयौ । जीप रोक्दासम्ममा साँझ परेको थियो, पुग्दा झपक्कै अँध्यारो भइसकेको थियो । काठमाडौं बस्ने ती युवक पनि उही होमस्टेमा बस्ने रहेछन् । घान्द्रुकमा सोलार इनर्जीको क्षेत्रमा काम गर्ने तीसहित हामी चारै जना त्यतातर्फ लाग्यौं ।
Previous बुद्घबारे अपव्याख्या
Next तीजमा पुरुषको नाचगान